पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भएको हत्या घटनाविरुद्ध बुधबार बुटवलमा प्रदर्शन भएको छ।
जाजरकोटका नवराज विकसहितको हत्या घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै दलित नागरिक अगुवा, मानवअधिकारकर्मी र नागरिकको सहभागितामा प्लेकार्डसहितको विरोध प्रदर्शन गरिएको हो।
उनीहरुले ‘रुकुम हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर, जातीय विभेदमाथिको बर्बरता कहिलेसम्म ? दलितमाथिको विभेद अन्त्य गर, रुकुम घटना पिडितलाई न्याय दे, अजित मिजार, नवराज विक र रुपन्देहीका अङगिरा पासीको हत्या कहिलेसम्म ? जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए।
बुटवल पुष्पलालपार्कको मुख्य सडकमा भौतिक दूरी कायम गर्दै प्लेकार्ड लिएकाहरुले जातीयताका नाममा हुने विभेद स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै संविधानको रक्षा गर्न सरकारले ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष विनोद पहाडीले मन्त्रालयमा बसेर रुकुम घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्न खोजिएपछि बुटवलका आमनागरिक स्वतस्फूर्त रुपमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन हुँदा पनि बाध्य भएर सडकमा उत्रनुपरेको बताए।
अभियन्ता नरबहादुर सुनारले दलित समुदायमाथि रुकुम पश्चिमको घटनाले मानव हुनुकै अर्थ बिर्साएको भन्दै दोषीले न्याय नपाउदासम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहने बताए।
प्लेकार्डसहितको प्रर्दशनमा दलित नेता जोगलाल विश्वकर्मा, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल, पत्रकार बालकृष्ण चापागाई, अगुवाहरु जुद्ध विश्वकर्मा, हरिओम विश्वकर्मा, रामकुमार रणपाल, एमबी विश्वकर्मा, लोकबहादुर नेपाली, दीपक विश्वकर्मा, मनु खड्का लगायतको सहभागिता थियो।
भेरी नगरपालिका–४ जाजरकोटका नवराज विक गत शनिबार रुकुम पश्चिम चौरजहारी सोती गाउँकी मल्ल थरकी एक युवतीलाई विवाह गर्न भन्दै लिन पुग्दा हत्या भएको थियो । उनीसहित ४ जनाको शव भेरी नदीमा भेटिएको छ। बुधबार मात्रै लोकेन्द्र सुनारको शव फेला परेको छ।
यसअघि नवराजसहित गणेश बुढामगर र चौरहजारी नगरपालिका-१ टीकाराम सुनारको शव फेला परिसकेको छ। घटनामा भेरी नगरपालिका ११ का १८ वर्षीय सञ्जु (सन्दीप) विक र १७ वर्षीय गोविन्द शाही अझै वेपत्ता छन्।
गत शनिबार नै रुपन्देही देवदह ११ की एक दलित बालिकाको हत्या भएको भन्दै उक्त घटनाको समेत छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न प्रदर्शनमा माग गरिएको थियो ।